तपाइँको नेटवर्कि Success सफलताको लागि १० लिंक्डइन प्रोफाइल सल्लाहहरू Martech Zone
तपाइँको नेटवर्कि Success सफलताको लागि १० लिंक्डइन प्रोफाइल सल्लाहहरू
आइतबार, अक्टोबर 11, 2015 मङ्गलबार, जनवरी 11, 2022 Douglas Karr
सेल्सफोर लाइफको यो इन्फोग्राफिक कसरी लिंक्डइन प्रोफाइल बेच्न अनुकूलन गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। ठिक छ, मेरो विचारमा, प्रत्येक लिंक्डइन प्रोफाइल बेच्नको लागि अप्टिमाइज हुनुपर्दछ ... अन्यथा किन तपाईं लिked्कइनमा हुनुहुन्छ? तपाईंको पेशामा तपाईंको मूल्य तपाईंको व्यावसायिक नेटवर्क जत्तिकै मूल्यवान छ।
त्योले भन्यो, म विश्वास गर्दछु कि धेरै व्यक्ति या त प्लेटफर्मको दुरुपयोग गरेर खराब गर्छन् तिनीहरूको लिंक्डइन प्रोफाइल अनुकूलन गर्दै। एउटा अभ्यास जुन म साँच्चिकै रोक्न चाहान्छु मान्छेहरूसँग कनेक्ट हुन प्रयास गर्दै जुन तपाईंलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छ कि तपाईं आफ्नो नेटवर्क बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, तर खाली निमन्त्रणा त्यसो गर्नुको मतलब होइन। सामाजिक मिडिया मार्फत मसँग कनेक्ट हुनुहोस्, कुराकानी गरिरहनुहोस्, मलाई बताउनुहोस् किन तपाईको लागि एउटा कनेक्शन मूल्यवान हुन सक्छ - र म सम्भवत जोडिएको छु!
तपाईंको लिंक्डइन प्रोफाइल तपाईंको रिजुमे हुन हुँदैन - यो तपाईंको उपलब्धिहरूका बारे होइन वा तपाईंले कोटा कसरी कुचल्नुभयो भनेर होइन। यसको सट्टामा, यो ग्राहक केन्द्रित हुनुपर्दछ, कुन सम्भावित संभावनाहरू र खरीदकर्ताहरूलाई तपाईं कुन मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा केन्द्रित। यस प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्: म कसरी आफ्नो खरीददारहरूलाई मद्दत गर्न सक्छु? यहाँ छ कसरी सामाजिक बिक्री को लागी सही लिंक्डइन प्रोफाइल क्राफ्ट गर्न को लागी।
कसरी तपाइँको लिंक्डइन प्रोफाइल अनुकूलन गर्ने
एक वास्तविक फोटो - म कार्टुन वा खाली छविहरूमा जडान गर्दिन। तपाईको अनुहार तपाईसँग भएको सबैभन्दा चिन्न सकिने सुविधा हो, यसलाई अनलाइन राख्नुहोस्। म एक खरानी, ​​बुढो, मोटो मान्छे हुँ ... म अझै पनि मेरो फोटो अनलाइन राख्छु। यहाँ उत्कृष्ट प्राप्त गर्नका लागि केही सुझावहरू छन् Linkedin प्रोफाइल फोटो (र तिनीहरू किन काम गर्छन्!)
तपाईंको शीर्षक - स्थिति शीर्षकले तपाईंलाई अरूहरू ल्याउने मान प्रदान गर्दैन। ओभरबोर्डमा नजाउनुहोस् र कृपया करोडपति हुनु हुँदैन।
सामग्री प्रकाशित गर्नुहोस् - आगन्तुकहरूलाई सान्दर्भिक सामग्री प्रदान गर्नुहोस् जहाँ उनीहरूले तपाईंको उद्योगमा तपाईंको विशेषज्ञता पहिचान गर्न सक्दछन्।
तपाइँको सारांश पोलिश गर्नुहोस् - तपाईंको हेडलाईनले उनीहरूको ध्यानाकर्षण गर्‍यो, अब समय केहि र color र कार्यलाई उत्कृष्ट कल प्रदान गर्ने समय हो।
दृश्य सामग्री साझा गर्नुहोस् - आगन्तुकहरूले तपाईंको पृष्ठ स्क्यान गर्दा, केही दृश्य सामग्री प्रदान गर्नुहोस् जुन आँखा चिम्ल्ने र तपाईंको प्रोफाईल अन्यबाट फरक पार्छ।
परिणामको साथ अनुभव - तपाईको कार्य ईतिहासले ती स्थितिहरूमा प्राप्त गरेको नतिजाहरूको बारेमा त्यति फरक पर्दैन।
अनुमोदनहरू - जब तिनीहरू अत्यधिक प्रयोग र अवमूल्यन भइरहेका छन्, समर्थन बिनाको प्रोफाइल दृश्यात्मक आकर्षक छैन। तपाइँको पाउनुहोस्!
सिफारिसहरू - अनुमोदनहरूको विपरीत, एक सहकर्मीले समय निकाल्ने राम्रो-योग्य सिफारिश शिल्प गर्न अविश्वसनीय मूल्यवान छ।
एक प्रकाशन जोड्नुहोस् - के तपाईं कहीं साझेदारी गरी लेख्दै हुनुहुन्छ? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको लिंक्डइन प्रोफाइलमा ती सेक्सनहरू थप्नुहोस् ताकि आगन्तुकहरूले तपाईंको विशेषज्ञता पहिचान गर्न सक्दछन्।
सम्मान र पुरस्कार - हामी यस्तो संसारमा बस्दछौं जहाँ तपाईंको सामाजिक र नागरिक संलग्नता तपाईं कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण कारक हो। यदि तपाईं पहिचान हुनुभयो भने, यो साझा गर्नुहोस्।
तपाईको प्रोफाईलमा अवलोकन गर्न निश्चित हुनुहोस् जस्तो कि सार्वजनिक र कनेक्शन द्वारा देखिएको छ ताकि तपाईं आफ्नो प्रोफाइललाई सुधार र अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुनेछ। दाहिने तर्फ, लिंक्डइनले तपाईंको प्रोफाइल सामर्थ्यको नाप पनि प्रदान गर्दछ ... यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्! म पनि लिंक्डइनमा भुक्तान सदस्यता अपग्रेड गर्न सिफारिश गर्दछु। तपाईंको प्रोफाईल फरक पार्ने र यसको दृश्यता बढाउने बाहेक, यसले तपाईंको प्रोफाइल कसले हेरिरहेको छ र तपाईं कसरी अरूसँग सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ भनेर चिन्नको लागि केही उत्कृष्ट उपकरणहरू प्रदान गर्दछ।
टैग: इंफोग्राफ़कलिंक गरिएको सामग्रीलिin्कडिन अनुमोदनहरूलिin्कडिन अनुभवलिin्कडिन शीर्षकलिin्कडिन अप्टिमाइजेसनलिंक गरिएको फोटोलिंक गरिएको प्रोफाइललिंक्डइन सिफारिसहरूजीवन को लागी बिक्रीबिक्री जीवन
तपाईंको मोबाइल अनुप्रयोग कसरी मार्केट गर्ने
पूर्वानुमान मार्केटिंग भनेको के हो?